Dragon Hills yemahara kwenguva shoma: app yevhiki | IPhone nhau
Dragon Hills yemahara kwenguva yakaganhurirwa: app yevhiki
Vhiki rega rega Apple inotipa fomu remahara kurodha mahara. Asi vagadziri vanotipawo mukana uyu nguva nenguva pasina Apple ine chekuita nazvo. Pane dzimwe nguva dzakapfuura takataura newe nezve zvinoshandiswa kana mitambo iyo vagadziri vanotipa isu kurodha mahara kwenguva pfupi Ino nguva mugadziri weiyo Dragon Hills application, inopa mutambo wayo mahara kurodha pasi pasina kubhadhara imwe euro. Dragon Hills ine mutengo wenguva dzose muApple application chitoro che1,99 euros uye sezvatinogona kuona mune ongororo ine zviyero zvakanaka kwazvo.
Sezvo isu tichigona kuverenga mune tsananguro yemutambo:
Tora itsvo kumusana kwedhiragoni ine ngozi mune chiitiko chakazara-bata uye ubatsire mwanasikana wamambo akatsamwa pakutsvaga kwake kutsiva. Slide uchidzika makomo, svetukira mukati nekubuda muvhu uye uparadze zvese zviri munzira yako.
Dragon Hills Zvimiro
Super mutambo unonakidza nekumhanya kuzere
Zviitiko zvizere zvinoparadza.
Epic boss hondo.
Yakasunungurwa yakakwidziridzwa zvombo, nhumbi dzokurwa, uye kugona kukuru.
Nyore kutamba, nzwisisa chidhiraivho pamwe nehunyanzvi Gameplay.
Kubudirira uye mabhodhi epamberi kukwikwidza ne Game Center shamwari
Tsigiro yekufananidza iyo mitambo kuburikidza neICloud.
Universal application, inowirirana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Inoda ingangoita vhezheni 7.1 kana inotevera iOS.
Yakakurudzirwa kwemazera matatu zvichikwira.
Neraki Dragon Makomo haina kupa chero mhando ye-in-app kutenga, chimwe chinhu icho zvinosuruvarisa kuve chakajairika kune vashandisi. Kana iwe uchida mutambo uyu, mugadziri weDragoni Hills akagadzirawo mitambo iyi: Aliens Drive Me Crazy, Baba Vanga Mbavha, Crumble Zone uye Night Flight
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Dragon Hills yemahara kwenguva yakaganhurirwa: app yevhiki
Sekureva kwaApple, kudiwa kweiyo iPhone SE inodarika zvinotarisirwa
Apple inosvika mamirioni gumi nevatengi paApple Music